चौबन्दी गायिका राउतलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति, अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चल्ने ! « MNTVONLINE.COM
चौबन्दी गायिका राउतलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति, अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चल्ने !
गायिका आस्था राउतलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । बुधबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडानबाट बाहिर जाने क्रममा सुरक्षा जाँचमा खटिएकी एक महिला प्रहरीले आफूलाई अभद्र व्याहार गरेको भन्दै गायिका राउतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रहरी कर्माचारी माथि आक्रोसपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकी थिइन् । आफ्नो फेसबुक लाईभमा ति महिला प्रहरीलाई पाएदेखि मुखमा डन्ठा घुसाएर कहाँबाट निकालिदिने भन्दै आक्रोश पोखेकी थिइन् । यति मात्र होइन, निजले सुरक्षाको अति संवेदनशील ठाउँमा कफीको कप लगेर त्यत्तिकै छोडी गएकी थिइन् भने प्रहरीलाई आफ्नो काम गर्न अवरोध पनि गरेकी थिइन् । गायिका राउतले आफ्नो फेसबुक लाईभमा प्रहरीमा बोल्ने संस्कार नभएको भन्दै नेपाली सेनालाई समेत मुछेकी थिइन् । यी संगठनका तल्लो तहका व्यक्तिलाई डन्ठे र डन्ठेनी भनेर उनले होच्याएकी थिइन् ।
किटानी जाहेरी नै परेको अवस्थामा यस विषयमा बुझ्नका लागि उनको खोजी गरिएको हो । प्रहरीमा उनले दिने बयानका आधारमा मुद्दा अघि बढाउने या नबढाउने विषयमा निर्णय हुनेछ । यसैबीच, सिक्किममा रहेकी गायिका राउतले आफु फरार भएको नभई काममा रहेको बताएकी छिन् । राउतले आफुले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताउँदै यसअघि नै केही शब्दहरु आफुबाट गलत बोलिएको स्वीकार गरेकी छिन् । सबैभन्दा विडम्बना त प्रहरीले आफुलाई अपशब्द बोलेको भन्दै तँ भनेको आरोप लगाउने उनले प्रहरीको तल्लो तहका कर्मचारीलाई त्यसभन्दा पनि बढी आरोप लगाएकी थिइन् । तुच्छ शब्दमा आक्रोशित उनले आक्रोशमा बोल्दा आफ्नै धोती फुस्किएको पत्तो पाइनन् ।